မိကဲလေး – Grab Love Story
မိအေးမိုး သနပ်ခါးလိမ်းပြီးသည်အထိ မိုးကမစဲ။အပြင်တွင် တဝေါဝေါ ရွာလျက်ရှိသည်။ဒီနေ့ ပျိုးနှုတ်သွားရမည့် ဦးဖိုးလုံးတို့ကွင်းက နဲနဲလှမ်းတော့ စောစောထပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်သည်။သွားရမှာဝေးပေမဲ့ အဖော်တွေက တလှေကြီး။ မိအေးမိုးတို့လို ဆယ်ကျော်သက်တွေသာမက အမေတို့အရွယ် အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် တွေထိ အရွယ်အမျိုးမျိုး အဖော်တွေစုံလှသည်။
ထမင်းကြမ်းစားပြီးချိန်ထိ အမေက မနိုးသေးသဖြင့် မိအေးမိုးအသာပင် ခြေကိုဖွနင်းပြီး အိမ်ပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်။ပလတ်စတစ်မိုးကာနှင့် ခမောက်က အိမ်ရှေ့ ကုန်းထဲတွင်ရှိ၍ မိအေးမိုး အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီး အိမ်ရှေ့ကုန်းထဲက တိုင်မှာ သံချိတ်တွင် ချိတ်ထားသောမိုးကာနှင့်ခမောက်ကိုယူမည်လုပ်ပြီးကာမှ အပြင်ဖက်တွင် မိုးကလည်း မစဲဘဲ တဝေါဝေါရွာနေသဖြင့် မိုးစဲမှဘဲ ထွက်တော့မည်။ကျန်တဲ့အဖော်တွေလည်း ထွက်ဦးမည်မဟုတ်ဟုတွေး၍ အိမ်ပေါ်သို့ပြန်တက်ပြီး ခဏထိုင်နေရန် မိအေးမိုး နောက်သို့ပြန်ရန် လှည့်လိုက်သည်။
မိအေးမိုး အိမ်ပေါ်တက်ရန် နောက်သို့ပြန်အလှည့် လူတယောက်နှင့်ပက်ပင်းတိုးမိပြီး
လန့်၍အော်လိုက်မိခိုက် ထိုလူက မိအေးမိုးကို အတင်းဖက်ပြီး နမ်းရှုံ့ တော့သည်။
မိအေးမိုးလန့်အော်သော်လည်း ဘယ်သူမှကြားမည်မဟုတ်။ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး မိုးသံက ဖုံးလွှမ်းနေသည်။
ထိုသူ၏ ရင်ဘတ်ကို အတင်းတွန်းကာ မိအေးမိုးရုန်းသော်လည်းမရ။ဖက်ထားသော ထိုလူ၏လက်များက သန်မာလှသည်။
သူမ၏ပါးနှစ်ဖက်ကို အတင်းလိုက်နမ်းနေသော နှာခေါင်းကြီးကို ရှောင်ကာ မျက်နှာကို ဘယ်ညာလှည့်သော်လည်း မလွတ်ပေ။ထိုသူ၏နှာခေါင်းကြီးက တွေ့တဲ့နေရာကို အမိအရလိုက်နမ်းနေလေသည်။
သူ့လက်ကြီးက မိအေးမိုးရဲ့နို့ပေါ်ရောက်လာပြီး ဖွဖွလေးညှစ်သည်။ထိုမှတဆင့် အကျီတွေခံနေ၍ အားမရဘူးထင်၏။အားဖြင့် ညှစ်သည်။
နာတယ်ဆိုတော့မှ နဲနဲလျှော့သွားသည်။မိအေးမိုး အသက်ရှုရတာမွန်းကြပ်လာသည်။
အလင်းရောင်မလာသေးဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးမှောင်နေပေမဲ့ လူချင်းကကပ်နေတော့ ရုန်းရင်းကန်ရင်း ထိုသူမျက်နှာကို သေသေချာချာကြည့်မိသည်။
လက်တဖက်က နို့နှစ်ဖက်စလုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ကိုင်ညှစ်နေပြီး သိုင်းဖက်ထားသော ကျန်လက်တဖက်က မိအေးမိုး၏လုံးလုံးကျစ်ကျစ် တင်သားတွေကို လိုက်ပြီး ဆုပ်နယ်နေလေသည်။
အနေအထားအရ သူမ၏ကိုယ်လုံးကို အတင်းအကြပ်ဖက်ထားတာ မဟုတ်တော့
ပေမဲ့ မိအေးမိုး ရုန်းထွက်ရန်မစဉ်းစားမိတော့ဘဲ မျက်လုံးလေးနှစ်လုံး စုံမှိတ်ကာ ငြိမ်ခံနေမိသည်ကို သူမဟာသူမ မစဉ်းစားမိတတ်တော့ပေ။
စားရကံကြုံတော့ မုတ်ဆိတ်ပျားဆွဲဆိုသလို မမျှော်လင့်ဘဲ လှအေးမှာ မိအေးမိုးနှင့် ပက်ပင်းတိုးခဲ့သည်။လှအေးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်မခံ ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးကျလိုက်သည်။
အခု ကောင်မလေး ငြိမ်ကျသွားပြီ။မျက်လုံးနှစ်လုံးမှိတ်ကာ အသက်ရှုသံတွေ ပြင်းထန်ကာနေပေသည်။
ခပ်တိုတိုဝတ်ထားသော ပုဆိုးထဲမှ ထောင်ထလာသော လီးကြီးဖြင့် မိအေးမိုး
၏ဆီးခုံတဝိုက်ကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး ထိုးထိုးပေးသည်။
မိအေးမိုး တကိုယ်လုံး နွမ်းနယ်ကာ ပစ်လှဲချချင်စိတ် တခဏအတွင်း ဖြစ်လာရသည်။သူ့ဟာကြီးကလဲ လူကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီးထိုးနေသည်။အမှတ်တမဲ့ မိအေးမိုးလက်တဖက်က လှအေး၏ပုခုံးစွန်းတဖက်ကို အမှီသဟဲပြုကာ ကိုင်လိုက်မိသည်။
လှအေး၏ အကိုင်အတွယ်တွေက ပိုပြီးကြမ်းလာသည်။’ဓနုံးချောင်း’ ရွာက အလှသရဖူလေး မိအေးမိုး သူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်နေပေပြီ။ရွာထဲက ကာလသားတွေ အမြင်ဖြင့်သာ ကျေနပ်နေရသော အလှသရဖူလေးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲထဲ့၍ ကိုင်နေရပြီ။ နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရပြီး တွေ့ရတိုင်း မြင်ရတိုင်းလည်း စိတ်ထဲကိုမရိုးမရွဖြစ်နေရတာတွေ ကို လှအေးတစ်ယောက် အတိုးချနေပေပြီ။
အခြေအနေအရ ဆိုလျှင် ဒီလောက်ဖြင့် တော်လောက်ပြီ။တော်တော်ကြာ မိအေးမိုး အမေ မမြင့်အေး ထွက်လာလျှင် ခက်မည်။
မိအေးမိုး၏ပါးတဖက်ကို အတင်းဖိကပ်နမ်းပြီး ဗြုံးကနဲ သူမကိုလွှတ်ကာ လှအေး
အထိအတွေ့တွေ ကင်းကွာသွားသော မိအေးမိုးဖြတ်ကနဲ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက် မိပြီး လှအေးပြေးထွက်သွားရာသို့ လိုက်ကြည့်မိလိုက်သည်။ပြီးတော့ အနားရှိ ထင်းတုံးပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်မိသည်။
မိအေးမိုး အသက်ကို မနည်းမှန်အောင်ရှုနေရသည်။လှအေးနမ်းသွားသော ပါးနှစ်ဖက်ကို လက်ဖျားလေးဖြင့် စမ်းနေမိသည်။ထူပိန်းနေအောင် လိမ်းထားသော ပါးမှ ပါးကွက်နှစ်ဖက်က မရှိတော့။
အတန်ကြာ ငိုင်နေပြီးမှ အပြင်ဖက်တွင် မိုးစဲသွားပြီး အလင်းရောင်ပြပြလေးပင် လင်းနေပြီကို သတိထားလိုက်မိကာ မိအေးမိုးတယောက် ထိုင်နေရာမှ ထ၍ မိုးကာကို ယူ၍ကောက်စွပ်လိုက်ပြီး ခမောက်ကိုစောင်းကာ ထွက်လာခဲ့လေတော့သည်။
မိအေးမိုး အလုပ်လုပ်နေရသော်လည်း စိတ်ကမပါ။တကိုယ်လုံး နေရထိုင်ရတာ ခက်လှသည်။ဒါ့အပြင် စိတ်ကလည်း တချိန်လုံး လှအေးကိုသာ သတိရနေမိသည်။
မနက်ကကိစ္စကို မိအေးမိုး နေ့ခင်းကျမှ ပြန်စဉ်းစားမိပြီး ထူးခြားချက်တခုကို ပြန်ပြီး သတိထားလိုက်မိသည်။မနက်က မိုးတွေ တဝေါဝေါရွာနေသည့်ကြားမှ လှအေး၏ ကိုယ်မှာ ရေစိုမနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။လှအေးက သူတို့အိမ် တအိမ်ကျော်တွင်နေသည်။ မိုးမလင်းသေးခင် စောစောစီးစီး သူတို့အိမ်ကို ဘာလာလုပ်တာလဲ။မိအေးမိုး စဉ်းစား၍မရ။
တခုတော့ရှိသည်။အမေခိုင်းစရာရှိလို့ စောစောခေါ်ထားတာလား။ဒါလဲ မဖြစ်နိုင်။မိအေးမိုး ထွက်လာသည်အထိ အမေက မနိုးသေးချေ။
လှအေးက အသက် ၃၀ လောက်ရှိပြီ။မိအေးတို့ အဖေရှိစဉ်က လှအေးသည်
မိအေးမိုး၏ဖခင်က မနှစ်က ဆုံးပါးသွားသည်။အဖေ ဆုံးသွားပြီးနောက် ကျန်ခဲ့သော လယ်ဧက ၂၀ ကို စပါးပေးဖြင့် အဖေ့ညီ ဦးလေးခင်မောင်ကို အငှားချလိုက်သည်။
အမေက အိမ်တွင် ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်ထားသည်။မိအေးမိုး၏ မိခင် မမြင့်အေးက အရွယ်က ၃၇ နှစ်သာရှိသေးသော်လည်း နောက်အိမ်ထောင်မပြုဘဲ အိမ်တွင်ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်၍ သားအမိနှစ်ယောက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့သည်။
ထိုင်မနေတတ်သော မိအေးမိုးက မျိုးနှုတ်၊ကောက်စိုက်၊စပါးရိတ်
စပါးလှေ့၊စပါးသယ်၊ဘောက်သောက်အလုပ်တွေကို အမေတားသည့်ကြားက အဖော်ကောင်းလျှင် ဝင်လုပ်သည်။
အိမ်ကိစ္စ၊ဆိုင်ကိစ္စ လိုအပ်တာရှိလျှင် အမေက လှအေးကိုခေါ်ပြီး ခိုင်းနေကြခြင်းဖြစ်လေသည်။မိအေးမိုး ဖခင်လက်ထက်ကထဲက လှအေးက သူရင်းငှား ဖြစ်လေတော့ လှအေးမှာ မိအေးတို့အိမ်တွင် စားအိမ်သောက်အိမ်ဖြစ်နေလေသည်။
မိခင်ဖြစ်သူ၏ အိမ်ခန်းဖက်ဆီမှ အသံသဲ့သဲ့ကြား၍ မိအေးမိုးခေါင်းထောင်ကာ နားစွင့်မိလေသည်။
အိမ်ခန်းဆိုသော်လည်း တံခါးနှင့်ဘာနှင့် သီးသီးသန့်သန့်အခန်းကာ ထားတာမျိုးမဟုတ်။အတွင်းအပြင် နံရံဝါးထရံတခုနှင့် ခြေရင်းတဖက်တွင် ဝါးထရံတခုကို ခြေရင်းဖက်နှင့်ကန့်၍ ခြားကာ ကာထားရုံသာဖြစ်သည်။
“…ဘယ်ပြန်မှာလဲ….မမအေးရ…..အိမ်ရှေ့က ဆိုင်ခန်းထဲ ဝင်အိပ်နေတာလေ….
မိအေးမိုး ရင်ထဲဒိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။
“….ကျွန်တော်ပြန်တော့ မိအေးမိုး…..သနပ်ခါးသွေးသံကြားတုံးဘဲ ရှိသေးတယ်…”
“…..ဟင်း….တော်သေးတာပေါ့….” ဟု မိအေးမိုး သက်ပြင်းချလိုက်မိသည်။
မိအေးမိုး အိပ်ယာထက်မှနေ၍ထိုင်လိုက်ပြီး ချက်ခြင်းထကာ မိခင်ဖြစ်သူ၏ အိပ်ခန်းခြေရင်းဖက် ထရံဘေးသို့ပြေးကပ်ပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်မိသည်။
ဖခင်ရှိစဉ်ကထဲက အိပ်ခဲ့သော ကုတင်ကြီးပေါ်တွင် မမြင့်အေးမှာ ခြေတွဲလောင်း ချထိုင်နေပြီး လှအေးက မမြင့်အေး၏ဘေးတွင် ယှဉ်လျက်သားထိုင်ကာ လက်တဖက်က မမြင့်အေး၏ပုခုံးကို သိုင်းဖက်ထားပြီး ပါးချင်းကပ်ကာ ပါးစပ်မှ တတွတ်တွတ်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ခဏအကြာတွင် မမြင့်အေးမှာ လှအေး၏လက်မှအသာရုန်းဖယ်ကာ သူမ၏အပေါ် ပိုင်းမှ အကျီင်္များကို ချွတ်လိုက်သည်။
မမြင့်အေးက ကြာမူပါပါဖြင့် မျက်စောင်းထိုးကာပြောလိုက်ရင်း သူမ၏ထဘီကိုပါ ချွတ်ချ လိုက်လေသည်။
ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားသော မမြင့်အေးကို လှအေးက တပ်မက်သော မျက်လုံးကြီးများနှင့် စူးစိုက်၍ကြည့်လိုက်သည်။
ရင်သားများမှာ ခပ်တွဲတွဲဖြစ်နေပုံရသော်လည်း ဖြူဖြူဝင်းဝင်းနှင့် မို့မောက်စွာ တလုံးတခဲကြီးဖြစ်နေသည်။နို့သီးခေါင်းလေးတွေမှာလဲ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့် ဖြစ်နေသည့်အတွက် လှအေး၏စိတ်များ ပို၍ကြွတက်လာသည်။အောက်ပိုင်းမှ ထွားထွားအိအိဖြင့် ကားနေသော တင်ပဆုံကြီးများမှာလည်း မက်မောစရာ ကောင်းလှသည်။
လှအေး ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ နက်မှောင်သော အမွှေးများ ဖုံးအုပ်ထားသည့် မမြင့်အေး၏စောက်ဖုတ်ကြီးက ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့ကြီး ဖြစ်နေလေသည်။
လှအေးက မမြင့်အေးတကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံးပွေ့ဖက်ကာ နို့အုံကြီးများကို ဆုပ်နယ်ချေမွလိုက်သည်။ပြီးတော့မှ ထောင်ထနေသော နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးများကို ငုံ့၍တပြွတ်ပြွတ်စို့တော့သည်။
တွေ့မြင်နေရသော မိအေးမိုးမှာ ရင်ထဲတွင် တလှပ်လှပ်ဖြစ်ကာ ကတုံကရင် ဖြစ်လာသည်။ဒါပေမဲ့ သူမ၏မျက်လုံးများကတော့ မြင်ကွင်းမှ မခွာနိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။
လှအေးသည် မမြင့်အေးကို အိပ်ယာပေါ်သို့ အသာလေးလှဲချလိုက်သဖြင့် မမြင့်အေးမှာ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်သွားရသည်။
ထိုအခါ လှအေးက မမြင့်အေး၏ကိုယ်ပေါ်သို့ကားယားခွကာ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး နောက် နို့သီးများကို ကုန်း၍စို့နေရင်း လက်တဖက်က ဖေါင်းထနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပွတ်သပ်၍ပေးနေသည်။
မမြင့်အေးမှာလည်း လှအေးကြောင့် ကာမစိတ်များမှာ ဟုန်းကနဲထလာပြီး သူမကလည်း အားကျမခံ လှအေး၏ရှည်လျားတုတ်ခိုင်သန်မာလှသော လီးတန်မဲမဲကြီး ကို ဆွဲကိုင်၍ပွတ်သပ်ပေးလေသည်။
ထိုသို့ တယောက်နှင့်တယောက် ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ရင်းက ကာမစိတ်များ လွန်ကဲလာပြီဖြစ်သော မမြင့်အေးမှာ အောင့်အီး၍ မနေနိုင်တော့ဘဲ သူမလက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် လှအေး၏လီးတန်ကြီးကို စောက်ဖုတ်ဝတွင်တေ့ပေးပြီး တင်ပါးကြီးများကို ကော့ထိုးပေးလိုက်သည့်အပြင်….
ဤတွင်မှ လှအေးမှာ ခါးကိုကော့၍ မမြင့်အေး၏စောက်ဖုတ်ဝတွင် တေ့လျှက်သား ရှိနေပြီဖြစ်သော သူ၏လီးတန်ကြီးအား တအားကုန်ဆောင့်၍ ထိုးသွင်းလိုက်ရာ မမြင့်အေးမှာ အင့်ကနဲဖြစ်သွားရုံမျှမက မျက်နှာပါ ရှုံ့မဲ့သွားရလေသည်။
“….လှအေး ကလဲ အရမ်းကြီးဘဲ…နင့်ဟာကြီးက အကြီးကြီးနဲ့…
“…….အစတော့ ဖြေးဖြေးပေါ့….နောက် အရှိန်ရလာတော့မှ နာနာဆောင့်ပါ…”
မမြင့်အေးက ထိုသို့ပြောလိုက်သဖြင့် လှအေးမှာဆောင့်အားကို လျှော့၍ ခပ်မှန်မှန် လေးငါးချက်လောက် ဆောင့်လိုက် ခဏနားလိုက် ပြန်ဆောင့်လိုက်ဖြင့် မမြင့်အေး၏
ချောင်းကြည့်နေသော မိအေးမိုးမှာလည်း ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသည့် လီးတန်ကြီး
ကို တွေ့မြင်နေရသည့်အပြင် အားရှိပါးရှိ ဆောင့်ပေးညှောင့်ပေးနေပုံများကိုပါ အနီးကပ် တွေ့မြင်နေရသဖြင့် သူမ၏စိတ်များ အဆမတန် ထလာခဲ့ရသည့်အပြင် သူမ၏မိခင် နည်းတူ လှအေးလုပ်တာကို ခံစားလိုစိတ်များ ပြင်းပြလာခဲ့ရလေသည်။
သို့ရာတွင် မိန်းမသားဖြစ်သည်မို့ သားအမိကလည်းဖြစ်နေတော့ စိတ်ကိုအသာပင် ချိုးနှိမ်ကာ မျက်စိအာရုံမပြတ်အောင်သာ ဆက်လက်၍ စူးစိုက်ကာ ကြည့်နေမိသည်။
လှအေး၏ဆောင့်ချက်များက အရှိန်ရလာပြီဖြစ်၍ မမြင့်အေး၏စောက်ဖုတ် အတွင်းတွင် အရေများက စိုစွတ်လာခဲ့ရပြီး တစွတ်စွတ် တဖွတ်ဖွတ် အသံများက ထွက်ပေါ်နေလေတော့သည်။
တဖြေးဖြေး ရမ္မက်စိတ်တွေ ပြင်းထန်လာသော လှအေးမှာ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လာသလို မမြင့်အေး၏တင်ပါးကြီးများမှာလည်း ကော့ကာမြှောက်ကာ လှုပ်ရမ်းလာခဲ့သည်။
မမြင့်အေး၏ ကော့မြှောက်ပေးမှုကြောင့် အရသာတွေ့လာသော လှအေးမှာ မမြင့်အေးတယောက် စိတ်တွေထန်လာပြီဟူသော အသိကြောင့် မမြင့်အေးအကြိုက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်ဆောင့်ပေးလိုက်သဖြင့် မမြင့်အေးမှာ အသဲခိုက်၍ နေရလေသည်။
မမြင့်အေး၏နှုတ်ခမ်းများ တဆတ်ဆတ်တုန်လှုပ်ရင်း အသံထွက်လာရသည့်အပြင် လှအေး၏လက်မောင်းများကို အားပါးတရဆုပ်ကိုင်ပြီး သူမ၏တင်ပါးကြီးများကို မြှောက်၍ မြှောက်၍သွားအောင် ကော့ကော့ပေးနေလေသည်။
လှအေးသည် မမြင့်အေး၏ပေါင်နှစ်လုံးကို ဆောင့်ကြောင်ထိုင်နေသော သူမ၏ပေါင် ပေါ်တွင် တဖက်တချက်စီတင်၍ လိုးနေရာမှ ရှေ့သို့ အနည်းငယ်ကုန်းလိုက်ပြီး မမြင့်အေး၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို သူမ၏ချိုင်းအောက်မှနေ၍ လက်လျှိုကာ ဆွဲထူလိုက်လေသည်။
ပက်လက်လှန်လျှက်ရှိသော မမြင့်အေးမှာ အလိုက်သင့်ပါလာရပြီး ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်နေသော လှအေး၏ပေါင်နှစ်လုံးပေါ်ဝယ် ခွလျှက်သားထိုင်မိနေသည့်အပြင် ဆီးခုံနှစ်ခုံတို့မှာလည်း ပို၍ထိကပ်သွားရလေသည်။
ထို့နောက် လှအေးက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်ရှိသော သူ၏ခြေထောက်များကို ဆင်း၍ ဖင်ချထိုင်လိုက်သည့်အခါတွင်တော့ မမြင့်အေးက လှအေး၏ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရဆုပ်ကိုင်ပြီး သူမ၏တင်ပါးကြီးများကို မြှောက်၍ ရမ္မက်စိတ်ပြင်းပြနေသည့် အလျောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆောင့်ဆောင့်ချလိုက်သည်မှာ လှအေးပင် တဟင်းဟင်း ဖြစ်လာရလေသည်။
လှအေးထက်ပင် ကာမရာဂစိတ်ပြင်းထန်နေသော မမြင့်အေးမှာ သူမသဘောကျ ဦးဆောင်၍ ဆောင့်လိုးနေလေသည်။
လှအေးကလဲ သဘောတွေ့ကာ သူ၏လက်များက မမြင့်အေး၏ တင်သားကြီးများကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်။
မကြာမှီ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ အဆုံးစွန်သော အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်လာတော့ မည်ဖြစ်သဖြင့် ဆောင့်အား ကော့အားများမှာ အတော်ပင် ပြင်းထန်လာလေသည်။
ထို့ပြင် တအင်းအင်း တဟင်းဟင်းဖြင့် နှုတ်ဖျားမှ အားမလိုအားမရ အသံများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရပြီး မျက်စိကို စုံမှိတ်ကာ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း အားကုန်ကြိုးလိုက်ကြ သည်မှာ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးပင် ယိမ်းထိုး၍နေလေသည်။
ထို့နောက် မကြာမှီအချိန်တွင်တော့ နှစ်ယောက်စလုံး၏ကိုယ်လုံးများမှာ တတွန့်တွန့်ဖြစ် လျှက် ခဏအတွင်း နှစ်ယောက်စလုံး ငြိမ်သက်သွားကြလေတော့သည်။
တွေ့မြင်နေရသော မိအေးမိုးမှာလည်း အစွမ်းကုန်သောင်းကျန်းလိုက်ကြသည့် သူမ၏မိခင်နှင့် လှအေးတို့ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီး မြင်တွေ့လိုက်ရသည့် အတွက် မိအေးမိုး၏ကာမစိတ်များမှာ ပြင်းပြတက်ကြွလာရလေသည်။
ထို့ပြင် သူမကိုယ်တိုင် ခံစားရသည့်အလား နှုတ်ခမ်းလေးများ တဆတ်ဆတ်တုန်၍ ရင်တွင်းဝယ်တလှပ်လှပ်ဖြစ်ကာ မောဟိုက်နွမ်းနယ်သွားရသဖြင့် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို မသယ်ချင်သယ်ချင် သယ်၍အိပ်ယာဆီသို့ ပြန်လာကာ လှဲချလိုက်လေတော့သည်။
မိအေးမိုးတစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်သို့လှဲချလိုက်ပြီး ခဏမှာပင် မိခင်ဖြစ်သူ၏ အိပ်ခန်းဆီမှ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအသံများကြားလိုက်ရပြီး လှအေးပြန်ထွက်သွားသံ ကြားလိုက်ရလေသည်။
ဘယ်လိုမှ အိပ်၍မပျော်နိုင်ဖြစ်နေသော မိအေးမိုးတယောက် ထမင်းအိုးတလုံး ချက်လောက်အကြာတွင် မိခင်ဖြစ်သူ မမြင့်အေး၏တရှုးရှုး အိပ်ပျော်နေသံကို ကြားလိုက်ရသည်။
မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ဇွတ်မှိတ်၍ အတင်းကြိုးစားကာအိပ်ပါသော်လည်း မိအေးမိုး အိပ်မပျော်နိုင်။တကိုယ်လုံးရှိ သွေးသားတွေက ရုန်းကန်ထကြွ၍ နှိပ်စက်နေကြသည်။
ထိုခဏမှာပင် သူမကို တစုံတယောက်က လာ၍ဖက်လိုက်သဖြင့် မိအေးမိုး မျက်လုံးလေးများ ဖြတ်ကနဲ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
သူမကိုလာဖက်သူက လှအေးဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည့် မိအေးမိုးမှာ အတင်း
ငြင်းဆန်၍ နေသော်လည်း အားကမပါချေ။
လှအေးက ပြောလဲပြော မိအေးမိုးအား အတင်းပွေ့ဖက်ပြီး ပါးပြင် နဖူးပြင်များကို တရှုံရှုံ့ဖြင့် အငမ်းမရ နမ်းရှုံနေလေသည်။
လှအေး၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွင် အကျီင်္မရှိဘဲ အောက်ပိုင်းတွင်သာ ပုဆိုးကို ခပ်တိုတိုဝတ်ထားသဖြင့် မဲ၍ပြောင်တင်းနေသော လှအေး၏ လက်မောင်းနှင့် ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးများဆီမှ ကြွက်သားဆိုင်ကြီးများကို ရုန်းရင်း ကန်ရင်းကြည့်ကာ မိအေးမိုး၏ရင်ထဲတွင် ပို၍ လှုပ်ရှားလာရလေသည်။
လှအေးက မိအေးမိုးကို လွှတ်၍မပေးသည့်အပြင် သူ၏လက်တဖက်က မိအေးမိုး၏ လုံးကျစ်နေသော ရင်သားတဖက်ဆီကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေပြန်ပါသည်။
ခဏအကြာမှာပင် လှအေးက မိအေးမိုး၏ထဘီလေးကို ခါးမှ ဆတ်ကနဲဆွဲချွတ် ပစ်လိုက်ရာ မိအေးမိုးမှာ သူမ၏ထဘီလေးကို လှမ်း၍ပင် မဆွဲနိုင်တော့ဘဲ ကွင်းလုံးကျွတ်ထွက်သွားရလေသည်။
သူမ၏ ဝင်းဝါဖြူဖွေးသော ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းလေးတွင် ဖြူဖွေးတောင့်တင်း၍ အဖျားရှုးသော မိအေးမိုး၏ပေါင်လုံးကြီးများနှင့် ထိုပေါင်လုံးကြီးများကြားတွင်တော့ အမွှေးနက်လေးတွေ ခပ်စိတ်စိတ်ဖုံးထားသည့် မိအေးမိုး၏ဖေါင်းမို့ခုန်းမောက်သော စောက်ဖုတ်ကြီးက ထင်ရှားစွာ ထွက်ပေါ်၍ လာခဲ့လေသည်။
ထိုမျှမကသေးဘဲ ရုန်းရင်းကန်ရင်း လှအေး၏ခါးတွင် ဝတ်ထားသော ပုဆိုးမှာလည်း ကျွတ်ထွက်သွားလေတော့ရာ သန်မာထွားကြိုင်းလှသည့် လှအေး၏
လီးကြီးမှာ ထောင်ထနေပြီး မိအေးမိုး၏ပေါင်တန်ကြီးများ တင်ပါးများကို သွား၍ သွား၍ ထိုးမိနေလေသည်။
ထိုသို့ ထိတွေ့ပွတ်သပ်မှုများ အကိုင်အတွယ် အနမ်းအရှုံများကြောင့် နဂိုကပင် ကာမရာဂစိတ်များ ပြင်းပြနေရသည့် မိအေးမိုးသည် ကြာရှည်ရုန်းကန်ခြင်းမပြုနိုင် တော့ဘဲ သာယာမှုဖြစ်လာပြီး တဖြေးဖြေး ငြိမ်မှန်းမသိ ငြိမ်ကျသွားရလေသည်။
အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော လှအေးမှာ မိအေးမိုး၏ အခြေအနေကို အကဲခတ်မိပြီမို့ တင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်ထားရာမှ အသာလျှော့ပေးလိုက်လေသည်။
လှအေးက မိအေးမိုး၏ ပါးပါးလှပ်လှပ်နှုတ်ခမ်းလေးများကို သူ၏နှုတ်ခမ်းထူထူ ကြီးများဖြင့် စုပ်နမ်းလိုက်လေသည်။
ထိုအခါတွင် ဆန္ဒပြင်းပြနေသော မိအေးမိုးမှာ ဘယ်လိုမှ မာန်တင်းမနေနိုင် တော့ဘဲ တကိုယ်လုံး မရိုးမရွဖြစ်သွားရပြီး အားမလိုအားမရဖြင့် လှအေး၏ပုခုံးများကို တင်းကြပ်စွာ ပြန်၍သိုင်းဖက်ရင်း လှအေး၏နှုတ်ခမ်းများကို ပြန်လည်စုပ်နမ်းမိသည် အထိ ဖြစ်သွားရလေသည်။
မိအေးမိုး၏နှုတ်ခမ်းများကို စုပ်နမ်းရင်းက လှအေး၏လက်တဖက်က သူမ၏ အကျီကြယ်သီးများကို စမ်း၍ တလုံးပြီးတလုံး ဖြုတ်လိုက်ရာ ကြယ်သီးအားလုံး ပြုတ်ထွက်သွားသည်နှင့် လှအေးသည် မိအေးမိုး၏နှုတ်ခမ်းများကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
ထို့နောက် သူမ၏အကျီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး အောက်မှ ဘော်လီအကျီင်္ကိုပါ တပါတည်း ဆွဲ၍ချွတ်ပစ်လိုက်လေသည်။
ဝင်းမွှတ်၍ ဖွံ့ထွားကာ ကော့တက်နေသော မိအေးမိုး၏ရင်သားနှစ်မွှာသည် ဝင်းမှည့်စွာ ထွက်ပေါ်၍ လာလေသည်။
ထို့နောက်လှအေးသည် မိအေးမိုး၏ကိုယ်လုံးလေးကို သူမအိပ်သော ကွပ်ပျစ်လေးပေါ်ရှိ အိပ်ယာထက်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ် ပက်လက်လေးဖြစ်အောင် ရွှေ့ပေးလိုက်သည်။ပြီးတော့ သူက ကွပ်ပျစ်အောက်သို့ ဆင်းလိုက်လေသည်။
မိအေးမိုးမှာ ကိုယ်တပိုင်းက ကွပ်ပျစ်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်လျှက် ခြေထောက်များက အောက်သို့တွဲလောင်းကျကာ မျက်လုံးလေးများ စုံမှိတ်ထားလေသည်။
သူမ၏ဖြူဝင်းသော ဗိုက်သားလေးများ၏ အောက်မှ ဆီးခုံမို့မို့နှင့် အမွှေးနုနုလေးများ ခပ်စိတ်စိတ်ပေါက်နေသော စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းလေးမှာလဲ ရမ္မက်ကြွစရာ ဖြစ်နေလေသည်။
လှအေးသည် မိအေးမိုး၏ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး မိအေးမိုး၏ နို့တလုံးကို ငုံ့စို့ကာ တလုံးကို လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ပေးလေသည်။
ခဏမျှအကြာတွင်တော့ လှအေး၏နှုတ်ခမ်းများသည် မိအေးမိုး၏ ဝမ်းဗိုက်သားလေးများဆီသို့ ပြောင်း၍ သူ၏နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးများဖြင့် စုပ်နမ်းနေပြန်ပါသည်။
လက်များကိုလည်း အအားမထားဘဲ နို့သီးခေါင်းလေးများကို လက်ညှိုးလက်မ တို့ဖြင့် ညှစ်၍ဆုပ်နယ်၍ပေးနေပြန်တော့ မိအေးမိုးတယောက် ရမ္မက်စိတ်တွေ တက်သည်ထက်တက်လာရပြီး တတွန့်တွန့်ဖြစ်နေရလေသည်။
တဖန် လှအေး၏လက်က အောက်သို့ရောက်သွားပြီး မိအေးမိုး၏ ဖေါင်းကြွခုံးမောက်နေသည့် စောက်ဖုတ်ကို တရွရွပွတ်သပ်ရင်း အကွဲကြောင်းလေးထဲ သို့ လက်ညှိုးကိုထဲ့ကာ ကလိပေးလိုက်ပြန်ပါသည်။
မိအေးမိုး၏ခါးလေးမှာ တချက်မျှ ဆတ်ကနဲကော့တက်သွားပြီး ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးများက လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားလေသည်။
ရမ္မက်စိတ်တွေ ပြင်းထန်လာသော မိအေးမိုးမှာ တကိုယ်လုံး လူးပျံလှုပ်ရှားနေရင်း သူမ၏ပေါင်တန်ကြီးကိုလာရောက်ထိတွေ့နေသော လှအေး၏ လီးတန်ကြီးကို သူမ၏လက်လေးက အမှတ်မထင် လှမ်း၍ဆုပ်ကိုင်မိလိုက်ပါတော့သည်။
လှအေးမှာ မိအေးမိုးက သူ၏လီးတန်ကြီးအား အလိုအလျောက် လာရောက်၍ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သဖြင့် ပို၍အကြိုက်တွေ့ကာ ကျေနပ်သွားရပြီး မိအေးမိုး၏ ဝမ်းဗိုက်သားလေးများကို သူ၏နှုတ်ခမ်းများဖြင့် စုပ်နမ်းနေရာမှ သူမ၏ဆီးခုံမို့မို့အောက် နားစပ် အသားတစ်တစ်လေးကိုပင် ပါးစပ်ဖြင့်စုပ်ယူကာ လျှာဖြင့် ယက်၍ပေးလိုက်သည်။
ဒီလိုအထိအတွေ့များကို မခံစားရဘူးသေးသည့် မိအေးမိုးမှာ လှအေး၏လည်ပင်းကို သူမ၏လက်တဖက်ဖြင့် သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး လှအေး၏လီးတန်ကြီးကိုလည်း ဆုပ်ထားရာမှ ဆွဲယူ၍ သူမ၏စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများနှင့် ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်တော့သည်။
အရည်တွေက ရွှဲနစ်၍နေချေပြီ။မိအေးမိုးသည် မျက်လုံးများ မဖွင့်နိုင်တော့ဘဲ အသံလေး တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြင့် လိုလားတောင့်တစွာ ပြောလိုက်လေသည်။
ထိုအချိန်တွင် လှအေးက သူ၏ပွတ်သပ်စုပ်နမ်းနေမှုများကို ရပ်နားလိုက်ပြီး သူမ၏ကိုယ်ပေါ်တွင် ခပ်ကုန်းကုန်းဖြစ်နေရာမှ ခါးဆန့်၍ မတ်တပ်ရပ်လိုက်လေသည်။
ထို့နောက် ကွပ်ပျစ်အောက်သို့ တွဲလောင်းကျနေသော မိအေးမိုး၏ ခြေထောက်များကို ကားလိုက်ကာ အလယ်တွင်ဝင်ရပ်၍ သူ၏ရှည်လျားတုတ်ခိုင်ကြီးမား၍ မာတောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို မိအေးမိုး၏စောက်ဖုတ်ဝတွင် တေ့လိုက်ပြီး သူမ၏ခြေထောက်များကိုပင် အားပြု၍ကိုင်ကာ လီးကြီးကို မိအေးမိုး၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဖိ၍ သွင်းချလိုက်လေသည်။
စောစောက နှိုးဆွထားသည့်အရှိန်ကြောင့် စောက်ခေါင်းအတွင်းဝယ် အရေများစိမ့်ထွက် စိုစွတ်နေသည့်တိုင်အောင် လှအေး၏လီးကြီးက ထွားကြိုင်းလှသဖြင့် အဆုံးထိမြုပ်ဝင် မသွားဘဲဖြစ်နေသည့်အတွက် လှအေးမှာ အားမလို အားမရဖြစ်သွားရလေသည်။
မိအေးမိုးမှာလည်း လှအေး၏ထွားကြိုင်းတုတ်ခိုင်လှသော လီးကြီးကြောင့် စောက်ဖုတ်တခုလုံး ပြည့်ကြပ်သွားရပြီး ကွဲများကွဲသွားမလားဟု ထင်မှတ်လိုက်ရရုံမျှ မက တင်းကြပ်နာကျင်မှုကိုပါ ခံစားသွားရလေသည်။
သို့ရာတွင် သူမ၏စိတ်တွင် ရမ္မက်များကလဲ ပြင်းထန်နေသည့်အတွက် လှအေး၏ လီးတန်ကြီးက သူမ၏စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ တဆုံးဝင်သွားရန်ဆန္ဒများ ပြင်းပြနေသည်။
ထိုကြောင့်ပင် မိအေးမိုးသည် သူမ၏ခြေထောက်များကို ထပ်မံ၍ ဖြဲကားပေးလိုက်လေသည်။
လှအေးသည် သူမ၏စောက်ဖုတ်ထဲမှ သူ၏လီးတန်ကြီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးထိပ်ဖူးတဝက်မျှသာ ကျန်တော့မှ မိအေးမိုး၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ထပ်၍ ဖြဲကားလိုက်သည်။ထိုအခါ နဂိုကထက်ပြဲအာသွားသည့် မိအေးမိုး၏စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ ပြန်လည်ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။
သည်တခါတွင်တော့ နှစ်ဦးလုံး၏အပေးအယူတဲ့မှုကြောင့် လှအေး၏လီးတန်ကြီးမှာ မိအေးမိုး၏စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အဆုံးထိမြုပ်ဝင်သွားလေသည်။
အဆုံးဝင်သွားသော လီးကို လှအေးက ခဏမျှငြိမ်ထားလိုက်သည်။
အမှန်ကတော့ အပျိုစောက်ဖုတ်ထဲကို ကြီးမားထွားကြိုင်းသော လီးကြီးက တဆုံးဝင်နေခြင်းကြောင့် မချိမဆန့်နာကျင်နေသော်လည်း လှအေး အရှိန်လျော့သွားမှာ စိုးသဖြင့် နဲနဲဘဲ နာတယ်ဟု ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
မိအေးမိုး အံကိုကြိတ်ရင်း မျက်လုံးလေး ဖြတ်ကနဲ ဖွင့်ကြည့်၍ပြောသည်။
လှအေးက လီးကို ခပ်ဖြေးဖြေး လက်သုံးသစ်ခန့် ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။လီးထိပ်က အရေပြားနဲ့ မိအေးမိုးစောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းတွေက ကပ်လျက်ပါလာလေသည်။
လှအေး ပြုံးလိုက်သည်။မိအေးမိုးအတော်နာနေကြောင်း သိသည်။ပြီးတော့ လီးကို
ငြိမ်ထားစဉ် ခံချင်လွန်းနေသော မိအေးမိုးက ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးနေသည်။
လှအေးက လက်သုံးသစ်ခန့် ထုတ်ထားသော လီးကို နဲနဲဆောင့်ပြီး သွင်းလိုက်သည်။
လှအေးက မိအေးမိုးကိုယ်ပေါ်ငုံ့၍ နို့သီးတွေကို လျှာတစ်လစ်ထုတ်ပြီး ယက်သည်။
မိအေးမိုးက မလုပ်တတ်လုပ်တတ်ဖြင့် လီးကို စောက်ပတ်ဖြင့် ညှစ်၍ ညှစ်ညှစ်ပေးသည်။
စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်များ တစစ်စစ် စီးထွက်လာသည်။
မိအေးမိုး စုပ်သတ်ကာ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးမှာ တွန့်လိမ်သွားပြီး မျက်နှာလေးမှာ မဲ့သွားကြသည်။
အဆုံးထိ မြုပ်ဝင်နေပြီဖြစ်သောလီးတန်ကြီးကို လှအေးက တဝက်သာသာမျှ ပြန်နှုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် ၄-၅ ချက်မျှ ခပ်ရွရွလေး ဆောင့်ပေးလိုက် ခဏနားလိုက် မိအေးမိုး၏ နို့သီးခေါင်းလေးများကို ယက်ပေးလိုက်ဖြင့် လုပ်ပေးလိုက်သည်တွင် မိအေးမိုးမှာ နာကျင်မှုတွေ တဖြေးဖြေး ပျောက်သွားပြီး အရသာတွေ့ကာ ရမ္မက်စိတ်များ တရွရွတက်လာရုံမျှမက သူမ၏ စောက်ဖုတ်အတွင်း
ဝယ် အရည်ကြည်များက အလျှံပယ် ထွက်လာရလေသည်။
ဤကဲ့သို့ မိအေးမိုး၏စောက်ဖုတ်အတွင်းဝယ် အရည်များရွှဲလာသည့်အတွက် လှအေး၏လီးတန်ကြီးမှာ စောစောကထက် ဆောင့်အားသွက်လာလေသည်။
လှအေး၏လီးကြီးမှာ ဆောင့်ချက်တွေ သွက်လာရုံမက လီးတန်ကြီးကိုလည်း အဆုံးနီးပါး ဆွဲထုတ်၍ တဆုံးပြန်သွင်းကာ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်၍ လိုးနေလေသည်။
လှအေးက ခပ်သွက်သွက်လေး အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ဆောင့်ဆောင့်ပေးလိုက် သည့်အခါတွင် မိအေးမိုးမှာ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲ ဖြစ်သွားရလေသည်။
လှအေး၏လီးတန်ကြီးက သူမ၏စောက်ခေါင်းအတွင်းဝယ် ထိတွေ့မှုက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြင့် ပြည့်ဝသော အရသာကို ပေးစွမ်းနေသည့်အတွက် လှအေးက ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း သူမ၏မျက်လုံးလေးများမှာ မှေးမှေးကျသွားပြီး အသဲခိုက်အောင် ကောင်းနေလေတော့သည်။
ကလေးလဲမွေးဘူး အသက်လည်း ၃ရနှစ် ရှိသော မမြင့်အေးကို လိုးရသည်မှာ လှအေးအဖို့ စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝမရခဲ့သော်လည်း အပေးအယုကောင်းလှ သည့်အတွက် အစွဲကြီးစွဲခဲ့ရသည်။မမြင့်အေးနှင့် ယခု သူလိုးနေရသည့် သမီးဖြစ်သူ မိအေးမိုးတို့၏အထိအတွေ့ခြင်းက မတူညီသည်ကို ခံစားသိရှိရသည်။
မမြင့်အေး၏စောက်ဖုတ်သည် မိအေးမိုး၏စောက်ဖုတ်ထက် ပို၍ကျယ်သည်မို့ လိုးရသည်မှာ မိအေးမိုးက ပို၍အရသာရှိသည်။
သို့ရာတွင် မိအေးမိုးမှာ သူမ၏မိခင်လောက် အပေးအယူ မကျွမ်းကျင်လှသဖြင့် လှအေးက ဦးဆောင်၍နေရသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နောက်တော့ မိအေးမိုးတယောက် သူ့အမေလို တဖြေးဖြေး အပေးအယူကောင်းလာမည်ဟု မျှော်လင့်ကာ လှအေးက အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နပ်လေသည်။
မိအေးမိုးတယောက် တကိုယ်လုံး တုန်ကာ ထိုကဲ့သို့ပြောလာသဖြင့် မိအေးမိုး ပြီးချင်လာကြောင်း သိလိုက်ကာ လှအေးကိုယ်တိုင်မှာလည်း ကာမအရသာ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်လုနီးပါးဖြစ်သည့်အတွက် လှအေးသည် အတင်းကြုံး၍ ၁၀ ချက်လောက် ဆောင့်၍လိုးလိုက်တော့ရာ သူတို့နှစ်ယောက်သည် ပြိုင်တူ ပြီးသွားရလေတော့သည်……။